mahakasika ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra manerana ny Nosy. Anisan’ny ezaka ho tanterahina ny fametrahana tahirin-kevitra fototra tokana izay ahafahana manara-maso ny fivoaran’ny tahan’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fandikan-dalàna eto Madagasikara. Ny Polisim-pirenena manokana efa manana statistika sy salan’isa izay azo avy amin’ny fanangonana ireo vaovao avy amin’ireo sampan-draharaha isan-tsokajiny izay misy ao aminy. Ahitàna ny fivoaran’ireo raharaha izay kirakiraina eo anivon’ny Polisim-pirenena, ireo fandikan-dalàna araky ny sokajiny avy, ny isa sy ny mombamoba ireo olona voarohirohy mba ahafahana mandray mialoha ireo fepetra rehetra mba hanatsarana ny fandrindràna ny fandriam-pahalemana sy mba ahafahana manome vaovao mari-pototra ho an’ireo olom-pirenena tsy an-kanavaka. Etsy andaniny kosa ny INSTAT hamokatra vaovao sosialy ho amin’ny tetikasam-pandrosoana, ary mametraka ny lafiny fandriam-pahalemana ho anisan’ny laharam-pahamehana amin’ny andavanandron’ny mponina. Izany indrindra no maha zava-dehibe ny famoahana ireo antontan’isa azo antoka ary mari-pototra avy amin’ireo vaovao ofisialy avy amin’ny Polisim-pirenena.